Huawei P10 Pro ၏ 30X zoom ကိုပြသသည့်ဓာတ်ပုံများပေါ်ထွက်လာခဲ့သည် Androidsis
Oppo က၎င်း၏ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် ကင်မရာနည်းပညာ 10X lossless zoomဘာစီလိုနာတွင် MWC 2019. တွင်နည်းပညာကိုကောင်းစွာလက်ခံခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်မျှဝေထားသည့်နမူနာများကနည်းပညာသည်ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ကြောင်းပြသသည်။
အခြားဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနည်းတူဤနည်းပညာသည် Oppo စမတ်ဖုန်းများအတွက်ကာလကြာရှည်မခံနိုင်ပါ။ တရုတ်ကုမ္ပဏီကtheပြီလမှာဒီအင်္ဂါရပ်ပါတဲ့ဖုန်းကိုမဖွင့်ခင်တောင်မှ Huawei ကဒီဖုန်းကိုစတင်မိတ်ဆက်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုပြနေပါတယ် P30 Pro ကို 10X zoom ဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဓာတ်ပုံများရရှိစေရန် periscope မှန်ဘီလူးနှင့်အတူ။
လက်ကိုင်ဖုန်းထုတ်ကုန်လိုင်း၏ဒုဥက္ကpresident္ဌဖြစ်သော Huawei မှ Brue Lee သည် Weibo ရှိပစ္စည်းမှရရှိသောနမူနာများကိုမျှဝေခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကကုမ္ပဏီနှင့် Vodafone အတူတကွတပ်ဆင်ထားသည့် 5G အချက်ပြမျှော်စင်၏ဓာတ်ပုံလေးပုံကိုမကြာသေးမီကမျှဝေခဲ့သည်။ နမူနာများကိုဂရုတစိုက်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ကွဲပြားသော focal length ရှိဖမ်းယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် 10x zoom, 5x zoom, zoom မရှိ၊ super wide angle ဓာတ်ပုံတို့ပါ ၀ င်သည်။ ဒါကရှင်းရှင်းလင်းလင်းလက္ခဏာပါ el P30 Pro ကို သင် 10X zoom function ကိုရလိမ့်မည်.
10X zoom ကင်မရာနမူနာသည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ပုံတွင်ဆူညံသံသို့မဟုတ်မှုန်ဝါးမရှိ။ အလွန်ချွန်ထက်ထွက်လာပါတယ်။ The Huawei က P20 Pro ကို သူကအတော်လေးအားကောင်းတဲ့နောက်ကင်မရာ setup တစ်ခုရှိခဲ့ပေမယ့် P30 Pro မှာရှိတဲ့သူကဘားကိုပိုမြင့်အောင်လုပ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒါဟာသူကပြောပါတယ်ဖြစ်ပါတယ် ကိရိယာတွင် CMOS အာရုံခံကိရိယာအသစ်ပါဝင်သည် အရာ 10x optical zoom ကိုအောင်မြင်ရန် periscope ကင်မရာကိုပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် P30 Pro တွင်ကင်မရာလေးလုံးပါ ၀ င်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် TOF 3D အာရုံခံကိရိယာမျက်နှာအသွင်အပြင်နှင့် 3D မော်ဒယ်လ်တို့ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ Huawei ကိုမတ်လတွင်ဖြန့်ချိမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Huawei P10 Pro ၏ 30X zoom ကိုပြသသောဓာတ်ပုံများပေါ်လာသည်
Xiaomi Black Shark Skywalker သည်အသိအမှတ်ပြုခံထားရပြီးဓာတ်ပုံသည်၎င်း၏ဒီဇိုင်းကိုယိုစိမ့်စေသည်